Fire OS - ဝီကီပီးဒီးယား
Fire OS 5.1.4 ၏ အသွင်အပြင်
Fire OS 5.3.2.1 / ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၆; ၄ နှစ် အကြာက (၂၀၁၆-၁၂-16)
Fire OS5Developer Preview for Amazon Fire TV / ဩဂုတ် ၁၇၊ ၂၀၁၅; ၆ နှစ် အကြာက (၂၀၁၅-၀၈-17)
Amazon FireOS သည် အန်းဒရိုက်ကို အခြေခံကာ ရေးသားဖန်တီးထားသည့် မိုဘိုင်းစက်လည်ပတ်မှုစနစ် ဖြစ်သည်။ အမေဇုံကုမ္ပဏီမှရထုတ်လုပ်ထားသည်။ ၎င်းတို့၏ Fire Phone, Kindle Fire, Tablet များနှင့် Fire TV တို့တွင် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် အန်းဒရွိုက်မှ ပုံစံခွဲထွက် ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ Fire OS သည် အမေဇုံမှ ထောက်ပံ့ပေးထားသည့် စတိုးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ရည်ရွယ်ကာ ထုတ်လုပ်ထားသည်။
၂ Fire OS ဗားရှင်းများ
၃ Fire OS ကို အသုံးပြုထားသော ကိရိယာများ
Fire OS သည် သီးခြားအသွင်အပြင်ကို အသုံးပြုထားသည်။ ၎င်း အသွင်အပြင်မှာ အမေဇုံ၏ ဝန်ဆောင်မှု အကြောင်းအရာများကို အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကာ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ Amazon Appstore, Amazon Video, Amazon MP3 & Audible, and Kindle Store စသည့် ဝန်ဆောင်မှု များ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် လတ်တလော ရယူအသုံးပြုခဲ့သည့် ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် အကြောင်းအရားများကို ဖော်ပြပေးသည့် Recent အပိုင်းပါရှိသည်။ ဖော်ပြပေးထားသည် အကြောင်းအရာများမှာ apps, games, music, audiobooks, and video အစရှိသည်ဖြင့် မတူညီသည့် အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ကြသည်။
Fire OS ဗားရှင်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]
အောက်ပါတို့သည် အန်းဒရွိုက်၏ ဗားရှင်းပေါ်မူတည်ပြီး စီစဉ်ကာ အကြောင်းအရာ ခွဲခြား ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
5.2.1.2 – latest version for First Gen Fire TV devices.
5.2.4.0 – latest version for Second Gen Fire TV devices.
5.3.2.1 – latest version for December 2016
Fire OS ကို အသုံးပြုထားသော ကိရိယာများ[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ Android Code Analysis။ June 6, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Philosophy and Goals။ Android Open Source Project။ Google။ April 21, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Google’s iron grip on Android: Controlling open source by any means necessary။ Ars Technica။ December 8, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Amazon.com Help: Fire Software Updates။
↑ Jesse Freeman။ Announcing the Fire OS5Developer Preview for Amazon Fire TV။
↑ libc - platform/bionic - Git at Google။
↑ master - platform/external/mksh - Git at Google။
↑ toolbox - platform/system/core - Git at Google။ February 9, 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Licenses။ Android Open Source Project.။ Open Handset Alliance။ September 9, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “The preferred license for the Android Open Source Project is the Apache Software License, 2.0. ... Why Apache Software License? ... For userspace (that is, non-kernel) software, we do in fact prefer ASL2.0 (and similar licenses like BSD, MIT, etc.) over other licenses such as LGPL. Android is about freedom and choice. The purpose of Android is promote openness in the mobile world, but we don't believe it's possible to predict or dictate all the uses to which people will want to put our software. So, while we encourage everyone to make devices that are open and modifiable, we don't believe it is our place to force them to do so. Using LGPL libraries would often force them to do so.”
↑ What’s new in Amazon Fire OS5Bellini? - Pocket-lint။
↑ Amazon.com: Customer Discussions: Fire OS 5.1.1 Available for Download။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Fire_OS&oldid=560993" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။